Banjo® Forte. Fungisida vaovao hiadiana amin'ny tara-pahazavana - Gazety ovy System
Ny lozam-pifamoivoizana dia ekena ho aretina ovy manimba indrindra amin'ny ankamaroan'ny firenena manerantany. Ny loza lehibe ateraky ny aretina dia ny hafainganam-pandeha haingana amin'ny fiparitahany. Avy amin'ireo zavamaniry voa irery ao anatin'ny herinandro, dia mety hiparitaka amin'ny faritra nambolena iray manontolo ilay aretina, izay, raha tsy misy ny fepetra fiarovana, dia hitarika fahaverezan'ny ampahany lehibe amin'ny vokatra. Ny fanaraha-maso ara-potoana sy ny fandaharana fungicidal mahomby amin'ny fiarovana ovy dia hanampy amin'ny fisorohana ny fivoaran'ny tranga toy izany.
Ny fandrahonana lehibe
Araka ny filazan'ny All-Russian Research Institute of Phytopathology, ny agrarians an'ny faritra maniry voly ovy rehetra any Rosia dia tsy maintsy miady amin'ny tara-pahazavana (ny anton-dian'ny caomycete Phytophthora infestans).
Ireo zavamaniry mandroso tsara no iharan'ny aretina. Ny pathogen dia mamindra ravina, taho ary tubers. Noho izany, misy teboka maniry eo amin'ny ravina. Eo amin'ny ilan'ny ravina manodidina ilay toerana eo amin'ny sisin'ny tavy mahasalama sy marary amin'ny hamandoana avo dia miseho ny voninkazo fotsy, izay ny sporulation an'ny oomycete. Ny spore dia entin'ny orana sy ny rivotra, ary miparitaka amin'ny kirihitrala mahasalama ary mamindra azy ireo. Amin'ny toetr'andro maina, mivadika volontany sy maina ireo tampon'aretina, amin'ny andro mando dia mainty sy lo izy ireo.
Eo amin'ireo taho sy tahon-dravina dia miseho amin'ny endrika teboka volontany mainty ilay aretina. Rehefa mihanaka be ny aretina dia manjary malemy ny fotony. Matetika dia ny zava-maniry voalohany amin'ny tara-pahazavana dia misy ny zavamaniry misy tahony voadona. Amin'ny tubers marary, somary ketraka, teboka volontany somary maranitra natsangana no noforonina, ny nofo izay manana loko mainty volontany. Ilay mpanafatra fitrandrahana tara-pahazavana tara-pahazavana amin'ny endrika mycelium ao anaty tubers voadona, ary koa amin'ny endrika oospores amin'ny tany sy ireo potipoti-javamaniry.
"Ny loharanon'ny aretina voalohany dia mety ho an'ny masomboly sy ny tsimparifary (indrindra ny alina mainty)," hoy i Anastasia Ukolova, mpitantana ny voly ao Adam Rus. - Ny tsimokaretina dia mety hiparitahan'ny zana-kazo voatabia, izay voan'ny aretin-tratra ihany koa. Noho io antony io dia tsy tokony apetrakao mifanila ireo kolontsaina ireo. " "Ho fanampin'izay, - nanampy ny manam-pahaizana, - ny valan'aretina dia mety potipotika tsy nesorina tamin'ny tanimbary na nariana fantsona navela taorinan'ny volondehibe". Ireo antony rehetra ireo dia mety hampitombo ny toe-javatra amin'ny fihanaky ny aretina amin'ny alàlan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny oospora.
Fahadisoana amin'ny ady amin'ny tara-pahazavana
Na eo aza ny lazan'ny aretina be mpitia, tsy ny mpamboly ovy no afaka miady amin'ny fomba mandaitra. Anisan'ny lesoka mahazatra indrindra ny faran'ny tara (aorian'ny famantarana ny famantarana ny aretina) ny fanombohan'ny famafazana. Ny fitsaboana toy izany dia tsy mitarika ny vokatra tadiavina, satria ny ankamaroan'ny fungicides dia misy fiantraikany miaro sy prophylactic. Ireo zava-mahadomelina ireo dia afaka manampy eo am-piandohan'ny fampandrosoana ny aretina, saingy tsy mety "mamono afo raha efa nirehitra."
Ny lesoka fahita faharoa dia ny fampijanonana ny famafazana aloha. Ny fihenan'ny fitsaboana tsy ara-drariny dia miteraka fahalemen'ny fiarovana ny zavamaniry. Ny aretina dia afaka miseho amin'ny faran'ny vanim-potoana mitombo, izay mampidi-doza indrindra raha toa ka kasaina hotehirizina ireo fantsona.
Ny fifandimbiasan'ny fungicides misy fomba hafa na mitovy amin'ny fihetsika dia miteraka olana lehibe ihany koa. "Ity dia feno ny famoronana endrika mahatohitra tara-pahazavana", hoy ny fampitandreman'i Anastasia Ukolova. "Ankoatr'izay, ny filaharana diso amin'ny fampiharana fungisida amin'ny ovy dia efa fanitsakitsahana ireo fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, satria ny fihoarana ny habetsaky ny singa mavitrika ilaina dia mety hitarika ny fiangonany amin'ny tany, rano ary vokatra."
Ny fepetra hampihenana ny fahasimbana amin'ny tara-pahazavana ka hatramin'ny faran'izay kely indrindra dia fantatry ny mpamokatra rehetra amin'ny fambolena: ny fanarahana ny fihodinan'ny vokatra, ny fisafidianana ireo karazan'aretina tsy mahazaka aretina, ny fampiasana voa nafafy ary ny fampiasana vokatra mahomby amin'ny fiarovana ny zavamaniry.
Anisan'izany ny famonoana poizina vaovao Banjo® Forte avy any ADAMA. Izy io dia fanafody roa mifototra amin'ny dimethomorph sy fluazinam. Ny fitambaran'ireo akora mavitrika, tokana eny an-tsena, dia manome fiarovana azo antoka ny ovy tsy hiadiana amin'ny tara-pahazavana ihany, fa koa hiadiana amin'ny alternaria, lo fotsy, ary miaro ny volo-tongolo koa amin'ny otrikaretina peronospora.
"Ny Banjo® Forte dia miaro tsy ny ravina sy ny taho ihany, fa ny tubers ihany koa amin'ny dingana farany amin'ny vanim-potoana maniry sy amin'ny fotoam-pijinjana mialoha," hoy i Anastasia Ukolova nanamafy. "Tena zava-dehibe izany raha tehirizina tahiry ny ovy, satria ny loza ateraky ny aretina miafina dia ny fahasarotana mamantatra azy ireo amin'ny fotoam-pijinjana, ary ny fisian'izy ireo miafina dia miteraka fatiantoka lehibe mandritra ny fitehirizana."
Tombony lehibe iray an'ny Banjo® Forte ny fahombiazany amin'ireo hazakazaka fantatra rehetra amin'ny faran'ny tara-pahazavana, izay mahatonga azy io ho fitaovana ilaina amin'ny paikady antiresista hiadiana amin'ity aretina manimba ity.
Ny endrika miomana amin'ny fungisida - ny fifantohana amin'ny fampiatoana - dia mora ampiasaina. Tsy miteraka fanakanana ny vazivazy izany ary manome antoka ny famongorana zava-mahadomelina avo lenta ao anaty rano. Ho fanampin'izany, ny zava-mahadomelina dia manana fanoherana orana avo, izay manome fahaleovan-tena be amin'ny fotoana fitsaboana simika.
Vakio bebe kokoa:
Tags: mampikorontanafungicide Banjo® Forte
Ny oram-batravatra izay nandalo tamin'ny 26-27 jona dia nandray anjara tamin'ny fisehoan'ny fahatapahan'ny ovy any amin'ny tanimboly ampahibemaso. Ny famantarana voalohany ny aretina dia voamarika tamin'ny karazana ovy 2 voalohany ...
Isan-taona dia maro ny mpamboly ovy Rosiana no mamoy ny vokatry ny fijinjana azy ireo noho ny faharatran'ny hazavana. Ny mpanelanelana amin'ny faran'ny tara-pahazavana dia manana fahasamihafana lehibe tokoa, izay mamela azy tsy tapaka ...
VARITRON 470: fampiononana, hery bebe kokoa.
Ny ovy voalohan'ny tsena Okrainiana dia hipoitra amin'ny tapany voalohany amin'ny aprily